By vijayafm on	 March 14, 2018 BREAKING NEWS, देश, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, बाइलाइन, विविध खबर, स्थानीय
गैंडाकोट । नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पुर्व) गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं १४ गाहाटाँडीमा खानेपानी योजनाका लागि १ करोड ५ लाखको योजना पर्न सफल भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस गैंडाकोट नगर समितिको पहलमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं नवलपुर क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रा.डा. शशांक कोइरालाको सिफारिसमा खानेपानी योजनाका लागि १ करोड ५ लाखको योजना पर्न सफल भएको जनाइएको छ । उक्त योजना यही चैत्र ३ गते शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको गैंडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुकुमारी कँडेलले जानकारी दिनुभयो । सो योजनाको उद्घाटनका लागि क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रा.डा. शशांक कोइराला आउदैं हुनुहुन्छ ।
हाललाई सोही रकम बराबारको आयोजना सञ्चालन गर्नेगरी काम अघि वढाईएको छ । काम गर्दै जादाँ अपुग भए दाता खोज्ने नभए नगरपालिकाबाट पनि सहयोग हुने उहाँले बताउनुभयो । योजना सञ्चालनमा आएपछि हाल अमरापुरी क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी समस्या हल हुने उप मेयर कंडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति समेत गठन गरिएको छ । उक्त योजना सञ्चालनका लागि स्थानिय खडानन्द कँडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा केशवराज मिश्र, सचिवमा महाशर्मा न्यौपाने, कोषाध्यक्षमा शोभा कुँवर मगर, सदस्यहरुमा शालिकराम सापकोटा, इमानसिंह मोक्तान, कर्मसिंह सारू, फुलमाया तमाङ, मीना परियार रहनुभएको छ । उक्त कार्यक्रममा गैंडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुकुमारी कँडेलको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।